यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ? - Daily Lokmandu
Homeसमाचारयौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ?
August 9, 2018 समाचार Comments Off on यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ?
सेक्स संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक चीज हो, जसका कारण सेक्स सधैं चर्चाको शिखरमा रहन्छ । सेक्सलाई अझ आनन्दायक बनाउन विभिन्न शैली, पोजिसन, पहिरन, बेड, स्थानजस्ता कुराको पनि विशेष ख्याल गरिन्छ । महिलालाई सबैभन्दा बढी मज्जा दिने सेक्स पोजिसन के -के छन् त ?
यो पोजिसनमा यौनसाथीहरू एक-अर्काको साइडमा चम्चा खप्टिएझैं गरी सेक्स क्रियाकलाप गर्छन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा लामो समयसम्म यौनक्रीडामा सहभागी हुन सकिने विश्वास गरिन्छ ।
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ र ? एउटा अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।